ISyberia neSyberia 2, zithengiswa ngesikhathi esilinganiselwe iMac App Store | Ngivela kwa-mac
ISyberia neSyberia 2, zithengiswa ngesikhathi esilinganiselwe iMac App Store
UJesu Arjona Montalvo | | Imidlalo, Mac App Store
Imidlalo I-Syberia y I-Syberia 2 iyathengiswa isikhathi esilinganiselwe ku- Mac App Store nje 1,99 € umdlalo ngamunye. Izintengo ezivame ukuba nazo le midlalo ezakhe 11,99 € y 14,99 € ngokulandelana, ngakho-ke ngaphansi kwama-euro ayisihlanu le midlalo emibili emikhulu ingaba ngeyakho. Le midlalo yomibili ingenile ngokuphelele español.
Kuyo yomibili le midlalo ungena ngaphansi kwesikhumba sakho UKate Walker, ummeli osemncane futhi ovelele ovela eNew York, lapho engxenyeni yokuqala ephathiswe lokho ekuqaleni okubonakala njengomsebenzi olula: ukumisa ngokushesha ukuphatha ukuthengiswa kwendala imboni ye-automaton ucasha eziGodini ze-Alpine bese ebuyela ekhaya e-United States, kepha izinto azinjengoba zibukeka.
Engxenyeni yesibili, uqala uhambo olusha lokuthola ifayela le- okokugcina kwama-mammoth adumile aseSyberia enhliziyweni yendawo yonke ekade yakhohlwa, lapho kuzokwenzeka khona izimfihlakalo ezinkulu.
Izinhlamvu ezithakazelisayo nezindida.
Ama-engeli ekhamera yesitayela seCinematic, ukunyakaza, nokubiyela.
Isimo esiyingqayizivele futhi esingenakuqhathaniswa.
Indaba yasekuqaleni futhi ethokozisayo.
Izinhlamvu ezintsha ezicebile nezithakazelisayo ezinendawo entsha enengqondo nenemininingwane ye-3D.
Ama-puzzle ahlanganiswe ngokuphelele azovivinya amakhono wabadlali ngokudlala.
Ungathenga isethi ye- I-Syberia ngqo kusuka ku- Mac App Store, ngokuchofoza kusixhumanisi esilandelayo.
Ungathenga isethi ye- I-Syberia 2 ngqo kusuka ku- Mac App Store, ngokuchofoza kusixhumanisi esilandelayo.
I-Syberia 212,99 €
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Imidlalo » ISyberia neSyberia 2, zithengiswa ngesikhathi esilinganiselwe iMac App Store
Kuyadumaza, lolu uhlelo lokuvuselela i-iPhone olwethulwe yi-Apple eSpain
I-3D puzzle ZeGame manje ku-Steam enedemo nesaphulelo